कमजोर कूटनीति ।
सुरेश आचार्य, सञ्चारकर्मी
पाठकले पुस्तक नपढून् भन्ने सरकारको सोचाइ छ या पढेपछि केही जान्दछन् अनि विरोध गर्न थाल्छन् भन्ने सोचाइले हो । नत्र त ज्ञान बाँडिनुपर्नेमा, पुस्तक आयातमा सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा कर लगाउनु, भन्सारमा पुस्तक रोकिनु भनेको ज्ञानमा ताला लगाउन खोज्नु हो ।
शोभिता सिंखडा, अभिनेत्री
ज्ञानमा लगाम ।
नवराज बुढाथोकी, निर्देशक
यो त नेपाल सरकारको नालायकीपन हो ।
ज्ञानमा कर लगाएर सरकारले आफ्नो चेतनाको स्तर देखाएको छ । यसले नेपालको पठन संस्कृतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ ।
ज्ञानगुनका पुस्तकमा सरकारले कर लगाएर पुस्तक सीमा नाकामा रोकिनु दु:खद कुरो हो । कुन सामानमा कर लगाउने, कुन सामानलाई कररहित गराउने सरकारले नीति बनाउन सक्नुपर्छ, सरकारले तुरुन्त कररहित गराएर पुस्तकलाई नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आरसी कोइराला, संस्थापक अध्यक्ष, एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुप
बाहिरी देशमा ‘नेपालले सीमा नाकामा पुस्तकमा रोक लगायो रे’ भन्ने नराम्रो सन्देश गइसकेको छ । यसलाई समयमै ध्यान दिएर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । राज्यले केही बुझ्न र छानबिन गर्न पाउने पूरा अधिकार छ । अहिले सीमामा आएका पुस्तक रोकिनु नराम्रो भन्नुभन्दा पनि किन रोकिए भन्ने कुरा पनि गहन छ । एउटा दृष्टिकोणमा राज्यले आफूले पाउने कर पाउन गरिएको कुरा ठीक हो, तर पुस्तकमै चाहिँ किन यस्तो कडा ? भन्ने कुरा अलि फरक विषय हो । साहित्यिक र विचारपरक कुरामा राज्य केही लचक भइदिए आयातकर्ताले त्यस्तो लुकाउने र सम्पर्कमै नआउने थिएनन् होला । अरू विलासिताका वस्तुमा कर बढी कडा भए पनि यस्ता विषय वा वस्तुमा सरकारले केही लचकता देखाउनुपर्ने हो । ढिलै भए पनि अब सरकार र सञ्चारक्षेत्रले यस्ता बौद्धिक र सिर्जनात्मक विषयमा ध्यान दिन लागेकामा अब यस विषयले निकास पाउनेमा आशावादी छु, तर समस्या आएपछि सुल्झाउने भन्दा पनि अघि नै गम्भीर भएको राम्रो ।
पुस्तकमाथि सरकारको नियत राम्रो नभएको ठान्छु म । बौद्धिकतामा कर, यो हदै भयो नि ? सरकार व्यापारी बनेपछि यस्तै हुन्छ ।
सीमा नाकामा पुस्तक रोकिनुको अर्थ नेपाल सरकार, शिक्षाक्षेत्र र नेपाली जनताको पठनपाठन सम्बन्धमा संवेदनशील नहुनु तथा भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हुनु हो ।
सीमा नाकामा पुस्तक रोकिनु दुर्भाग्य हो । सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । जतिसक्दो चाँडो यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर चासो लिनु जरुरी छ ।
आदित्य बुढाथोकी, अभिनेता, निर्देशक
ज्यानभन्दा टाउको ठूलोजस्तो भएको छ, कर बढेर । पुस्तकजस्तो कुरा आमनागरिकले अध्ययन गर्न सुलभ ढंगले पाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले नै जुटाउनुपर्ने कुरा हो । शिक्षामा रोक लगाएजस्तै भयो नि यो त ।
नीलम रोजु राई, गायिका
विनाशकाले विपरीत बुद्धि । विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल रोक्न नसक्ने अनि किताबचाहिँ रोकेर बस् देश समृद्धितिर जाँदै छ भनेर बुझ्नुपर्‍यो जनताले ।
पैसालाई प्रेम गर्नेहरूले पुस्तकलाई प्रेम गर्दैनन् । त्यसकै परिणति हो यो सब ।
हरिमाया भेटवाल, साहित्यकार
लाजमर्दो कुरा । देशले शिक्षालाई कसरी हेरिरहेको छ, यो त्यसको उदाहरण हो ।
एकदम नराम्रो । किताबजस्तो आधारभूत कुरामा यस्तो राजनीति र पैसाको खेल खेल्न हुन्न । विद्यालयको कोर्स किताब अथवा कुनै किताब पढ्न मन लाग्यो भने एउटै पसलमा पाइन्न । धेरै पसल धाउनुपर्छ । हामीजस्तो मध्यमवर्गले जसोतसो किनौंला, अरूले चाहिँ के गर्लान् ? कुनै पनि जाति, वर्ग अथवा समूहलाई समाप्त गर्नु छ भने पहिला किताब जलाइदेऊ भन्ने भनाइ छ । त्यस्तै भएको हो यहाँ । नेपाली धेरै बुद्धिमानी होलान् भनेर किताबलाई निशाना बनाएका हुन् ।
सरकारले शिक्षाको महत्त्व नबुझ्दा पुस्तकलाई अन्य व्यापारिक वस्तुसरह मानेर भन्सार उठाउने प्रवृत्ति देखिएको हो ।
यादव हुमागाईं, सञ्चारकर्मी
स्वदेशमै छाप्नुपर्छ । पुस्तक रोकेको राम्रै हो ।
खानेकुरा, ग्याँस रोकियो भने गाह्रो होला, किताब बिस्तारै आउला ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामग्रीहरूमा कहीँ कतै रोक लगाउनु हुँदैन ।
अत्यन्त दु:खद कुरा । सरकारले हरकुरालाई करमा जोडेर नहेर्न अनुरोध गर्छु । किताबमा कर छुट हुन आवश्यक छ ।
प्रद्युम्न जोशी, साहित्यकार
अत्यन्त गलत काम । विश्वसँग जोड्न योगदान गर्ने किताब रोक्ने भन्दा पनि आयातमा सहजता ल्याउनुपर्छ ।
गिरिराज बाँस्कोटा, पत्रकार
पुस्तक ज्ञानको भण्डार हो । पुस्तक रोक्नु भनेको ज्ञान रोक्नु हो । ज्ञान रोकेर हामीले सोचेजस्तो समाज निर्माण गर्न सक्दैनौं । तसर्थ तत्काल पुस्तक खुला गर्नुपर्छ ।
पुस्तकजस्तो अध्ययन गर्ने जरुरी वस्तुमा यसरी सीमामा रोक लगाउनु भनेको निकै दु:खद कुरा हो । किनकि हरेक प्रकारका पुस्तक सामग्री नहुँदा धेरै मानिस अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् र धेरै नै असर पर्छ । यसका लागि सरकारले समझदारीमा कसरी हुन्छ, यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो निकम्मा सरकारको उदाहरण हो ।
निर्मल अर्याल, सञ्चारकर्मी
यो नेपाली पाठकमाथि गरिएको अपमान हो । ज्ञानको स्रोत पुस्तकमा कर लगाउनुले राज्यको गति कतातिर जाँदैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आमपाठकले आवाज उठाएर पुस्तकमाथि लादिएको कर हटाउन लाग्नुपर्छ ।
खिलक बुढाथोकी, पत्रकार